Sarin-tsarimihetsika ambony ambongadiny vita amin'ny kofehy vita amin'ny polyester ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny, China Top puzzle pattern polyester embroidery sheer for living room
Top piozila modely fanaovana amboradara polyester ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny
Model Number: 8715
● Volavolan-tsoratry ny amboradara ankamantatra, 100% polyester, habe namboarina.
● Fitaovana sy lamaody: ny haingon-dambam-baravarankely misy ambaratonga ankamantatra ankamantatra, ny lambam-baravarankely ankehitriny dia afaka mamboly fahatsapana kanto sy voajanahary, manampy rivo-piainana romantika sy mahazo aina ao amin'ny efitranonao.
● Sivana maivana: ireto sheer ireto dia vita tsara tarehy ary ampiany kanto amin'ny fitsaboana amin'ny varavarankely sy ny fisehoan'ny efitrano amin'ny ankapobeny. Ny famolavolana lamba vita amin'ny rongony dia manome tsiambaratelo ampy fotsiny nefa mbola mamela ny efitrano hanana jiro sahaza.
● Kanto sy haingon-trano: ity haingon-damaody ity miaraka amin'ny fijery mafana be dia be dia hameno ny efitrano malalaky ny trano rehetra. Tonga lafatra ho an'ny efitrano fandraisam-bahininao, efitrano fatorianao, efitranon'ny mpianakavy, efitrano fisakafoana, trano fidiovana, birao.
● Fikolokoloana mora: azo esorina amin'ny masinina amin'ny rano mangatsiaka, tsingerina malefaka, haidina ambany. Vy mangatsiaka raha ilaina.
Product Name Top piozila modely fanaovana amboradara polyester ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny
Fanaka lamba 100% Polyester
OEM / ODM Ekeo
Fotoana santionany 7days
Ora nanomezana lamba:30-35days, Curtains:50-60 andro.
fonosana Lamba: avo roa heny mihodina amin'ny fantsom-batsy, mihodina efatra na mihorona amin'ny takelaka taratasy.
Curtain: 1 pcs na 2cm ao anaty kitapo 1 misy fisaonana sy baoritra
hafa Grommet, french pleat, paosy paosy, tadivavarana, fehikibo / kasety, kasety miafina, namboarina
Masinina manasa mangatsiaka, tsingerina malefaka, aza manapotika, mianjera ambany ambany, vy maivana ilaina.
PREMIUM FABRIC: Polyester tsara kalitao 100%. Ny habetsaky ny firakotra somary manolotra dia malefaka amin'ny hoditra. Toa tsara tarehy sy kanto izy ireo, ary tsy misy lamba firakotra tsotra fotsiny, izay tadiavinao fotsiny
Saron-dambam-bolo fotsy marevaka miaraka amin'ny fatorana zipper sy zoro